Discoid lupus erythematosus: izimbangela, izimpawu kanye zokwelapha
Discoid lupus erythematosus - ongavamile isifo sokuhlasela kwamasosha omzimba ukuthi sihlasela kakhulu abantu besifazane. Izibalo zikhomba ukuthi ngo-1000 abesifazane zaba 3-8 kuphela abaphethwe yilesi sifo. Iyini imbangela ivela khona futhi yiziphi izimpawu eziyinhloko?
Discoid lupus erythematosus: izimbangela
Eqinisweni, izimbangela zezifo ezifana akwaziwa. Kufanele kuphela kuqashelwe ukuthi ihlobene ukungasebenzi kungenza isimiso somzimba sokuzivikela, okuholela igazi labelwe omzimba athile ezithinta amaseli omzimba siqu.
Ochwepheshe bakwazi ukufakazela ukuthi izifo ezinzima ezithathelwanayo ngokuvamile iholela umsebenzi okungavamile izivikeli mzimba. Kwezinye izimo, kwethulwa inqubo sokuhlasela kwamasosha omzimba kuthonywa okukhulu emisebeni yelanga.
Discoid lupus erythematosus: isithombe kanye nezimpawu
isifo okunjalo kuhambisana izici isici kakhulu, kodwa phawula ukuthi ayinakwenzeka. Njengomthetho, lesi sifo iqala ukuthuthukiswa Izilonda kanye erythema. Ngokuvamile ububomvu kanye izindawo kungabonwa ubuso, intamo kanye izandla, kodwa ezansi iqhuma cishe akukho emzimbeni.
Njengoba isifo siqhubeka amagxolo on indawo ethintekayo iqala ikhasi off - ngezinye izikhathi akhiwa khona amabala amhlophe, nezibazi kancane. Uma erythema uvele ekhanda, izinwele uwela out kule ndawo.
Cishe 15% of the discoid lupus izilonda ephelezelwa ulwelwesi mucosal we ngalo ingaphakathi ngomlomo. Ngokuvamile lesi sifo kuhambisana izifo amalunga nemisipha, okuyinto ngenxa yalokho kuholela ubuhlungu, ubuthakathaka kanye umzimba iba buhlungu.
Kufanele kuphawulwe ukuthi zonke lezi zimpawu ezithinta kakhulu isimo esingokomzwelo isiguli - lesi sifo kuvame ukubangela ukucindezeleka, ukudangala, iloli sezinzwa.
Discoid lupus erythematosus: ukwelashwa
Ngeshwa isifo esingelapheki ukuthi ngeke welaphe ngokuphelele. Nokho, ezokwelapha zesimanje kuqeda izimpawu eziyinhloko ngisho ukuvimbela ukuthuthukiswa kwe-exacerbation esilandelayo. kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-ekwelapheni amalungiselelo hormone - lokhu isixazululo umjovo ongama, kanye amaphilisi kanye yokugcoba ukusetshenziswa ngezihloko ezihlukene. Zonke lezi imithi aqukethe steroid, okuyinto ukulwa ngempumelelo ukuvuvukala. Faka nama-gel sokuvikelwa isikhumba kusukela emisebeni ultraviolet, yiso kanye lesi isici ngokuvamile kuphakamisa ukuthuthukiswa lesi sifo. Iziguli nazo ebekiwe izidakamizwa senhliziyo ukuthi kuncishiswe ingozi necrosis izinqubo. On isimo kanye isimo empilweni yabesifazane ngokuphelele kuthinta edonsa amavithamini B no-C
Discoid lupus erythematosus: zokuvimbela
Yiqiniso, ngisho emva kokwelashwa ngempumelelo abesifazane nale uphethwe yini kufanele ibhekane ngihlolwa njalo futhi athathe ukuhlolwa ezidingekayo - indlela kuphela ukuvimbela ukuqhubekela phambili kwesifo kanye nokuthuthukiswa ukuxakeka. Kubaluleke kakhulu ukuvikela isikhumba ukusuka elangeni - hhayi ukuba ngiphume uma libalele ngaphandle isambulela zokuzivikela ukulahla ukushuka kanye ukushuka, aphathe isikhumba nge imikhiqizo ekhethekile equkethe UV izihlungi. Ngaphezu kwalokho, kumelwe futhi ugweme hypothermia kanye nokulimala zesikhumba izicubu.
Njengoba uvendle ngocansi, izimpawu, nokuvinjelwa, kanye nokwelashwa izimbangela
Utamatisi izinhlobo ukhilimu: Photo & Izibuyekezo
Yini kuyingozi ngoba izinja isoniazid
Uma uya e-Ekaterinburg, ungakhohlwa ukuvakashela i-zoo yokuxhumana!
Abazingela yasendle ebusika